स्वास्थ्य र खानपिन – Nepal Online Khabar
Mar222021 by Puja SharmaNo Comments
Posted in स्वास्थ्य र खानपिन
काठमाडौँ : नसर्ने रोगको सूचीमा प्रमुख रुपमा आउँछ म’धुमेह रोग । सामान्य साव’धानी अपनाउनसके निय’न्त्रण गर्न सकिने यो रोग खानपान र जीवनशैलीका कारण बढी देखिने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सके यो रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कसरी गर्ने व्यवस्थित ? १.चिनी र चिनीबाट बनेका परिकार नखाने । २. धूम’पान, सू’र्तिजन्य पदार्थ मद्यपान जस्तैः रक्सी, चू’रोट, खै’नी, बिडी आदि से’वन नगर्ने । ३. नून र चिल्ला कम खाने । ४. खानासंगै सलाद, हरियो सागसब्जी प्र’शस्त मात्रामा खाने । ५. गहुँ, मकै, कोदो, फापरबाट बनेका परिकार खाने । ६.शारिरीक व्यायामः दैनिक १ घण्टा हिंड्ने, खेतबारीमा हल्का काम गर्ने, सामान्य खेलकूदमा सहभागी हुने । ७. योगासन, ध्यान, प्राणा’याम गर्ने । ८. लामो समय सम्म भो’कै न बिहान उठ्ने वित्तिकै बेसार पानी पिउनुहोस्, रोक्छ मधु’मेहको ख’तरा ! प्रायजसो व्य’क्तिले बिहान उठ्ने वित्तिकै मन ता
Mar42021 by Nepal KhabarNo Comments
कसरी बिग्रिन्छ मानिसको मृगौला? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपायहरु..
काठमाडौं / मृगौला मानव शरीरको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्ये एक हो । मृगौलाले सही ढङ्गबाट काम गर्न नसक्दा गम्भीर रोग लाग्नेदेखि मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । अस्थायीरूपमा हुने मृगौला ड्यामेज (टेम्पोररी किड्नी ड्यामेज) र स्थायीरूपमा तथा दीर्घरूपमा मृगौला बिग्रिने अवस्था (पर्मानेन्ट किड्नी ड्यामेज) गरी मृगौलामा लाग्ने रोगलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । शरीरभरि फैलिने कुनै पनि सङ्क्रमण (पिसाब, रगत वा अन्य) वा सेप्सिस नै अस्थायीरूपमा हुने मृगौला ड्यामेजको मुख्य कारण हो । शरीरमा पानी तथा तरल पदार्थको मात्रा कम भएमा, झाडावान्ता भएमा, पानी नपिएको खण्डमा, रगतको मात्रा कम भएमा, दुर्घटना वा डेलिभरीको समयमा अत्यधिक रगत बगेमा तथा कुनै पनि कारणले शरीरको तरल पदार्थमा कमी आएमा किड्नीले काम गर्न छोड्छ र टेम्पोररी किड्नी ड्यामेज हुने गर्छ । टेम्पोररी किड्नी ड्यामेज हुँदा औषधि उपचारले निको हुन्छ भन
यी रोग हुनेले भुलेर पनि नखानुस म:म…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
एजेन्सी : लोकप्रिय ममको माग आजको बजारमा अत्याधिक मात्रामा रहेको छ । मानिसहरू स्टीम र फ्राई मम स्वाद मानी मानी खाने गर्छन्। तर स्वास्थ्यको हिसाबले मम गतिलो कुरा हैन किनकि यसले रक्तचापको समस्या बढाउँछ । रक्तचापको परीक्षण १२० ८० एमएमएचजीका आधारमा गरिन्छ । यहाँ १२० अंक सिस्टोलिक रक्तचाप हो र यसलाई सामान्य भाषामा हाई प्रेसर भनिन्छ । अनि तलको रक्तचापलाई डाइस्टोलिक भनिन्छ अर्थात् लो प्रेसर । चिकित्सकहरूका अनुसार, अत्यधिक मात्रामा फास्टफूड खाँदा युवामा उच्च रक्तचापको समस्या निकै बढिरहेको छ । तनावपूर्ण जीवनशैली, अनियमित खानपान, फल र मम जस्ता फास्टफूडको सेवन, चिल्लो र निष्क्रिय जीवनशैलीका कारण रक्तचापको समस्या बढिरहेको छ ।उच्च रक्तचाप आफैंमा एक रोग हो अनि यसले शरीरका अन्य अंगलाई पनि नराम्रो प्रभाव पार्छ । मुटु, कलेजो र मिर्गौलालाई यसले घात गर्छ। आँखालाई पनि यसले हानि गर्छ । उच्च रक्तचापका कार
काठमाडौ : रक्ताल्पतादेखि कब्जियतको औषधी- हरियो मकै स्वास्थ्यका लागि मकै अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । यसमा धेरैथरी मिनरल पाइन्छन् र तिनले शरीरलाई पौष्टिक आहार दिन्छन् । आजभोलि हरियो मकैको सिजन पनि रहेको छ । मकै अधिकांशले रुचाउने खाजामा पर्छ । यो स्वादिष्ट मात्रै नभएर स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायक छ । मकैलाई भुटेर, उसिनेर, पोलेर र भातको रूपमा सँगै विभिन्न परिकार बनाएर खान सकिन्छ । बेमौसमी मकै प्रायः सधैंभरी उपलब्ध हुन्छ । अब जानौँ मकै खाँदा के–के फाइदा हुन्छ ? जानौं यसका फाइदा : आँखा : आँखा स्वस्थ राख्नका लागि मकै अवश्य खानुस् । यसमा बीटा क्यारोटिन र भिटामिन ए प्रचूर मात्रामा हुन्छ र यसले आँखाका समस्या हटाइदिन्छ । कोलेस्ट्रोल : मकैमा भिटामिन सी, केरोटेनाइड र फाइबर हुन्छ र यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोल कम गरेर रक्तकोशिकालाई सफा बनाउँछ । अनि मुटुले राम्ररी काम गर्न पाउँछ । रक्ताल्पता
काठमाडौँ : अंगुर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो स्वादका निकै गुलियो र अमिलो हुने गर्दछ । यो एउटा रहरे फल हो । यो जन सुकै बेला पनि सेवन गर्न सकिन्छ । अंगुर सबैलाई मन पर्ने फलफुल हो । अंगुरलाई औषधीको रुपमा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसले मानिसको सुन्दरतासँगै स्वास्थ्यमा समेत राम्रो गर्छ । अंगुर खानाले कब्जियतको समस्याबाट टाढा राखी पाचनशक्तिलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । नियमित अंगुरको सेवन गर्नाले कोलस्ट्रल कम गर्न मद्दत गर्छ ।यसको सेवनले किड्नीको समस्या समाधान गरी युरिक एसिड कम गर्न सहयोग गर्छ ।यसको नियमित सेवनबाट छालाको सौन्दर्य, रुघाखोकी आदिबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । रक्तस्रावको समस्यामा एक गिलास अंगुरको जुसमा दुई चम्चा मह घोलेर खाने हो भने नियन्त्रणमा आउँछ । घाउ, खटिरा निको पार्न पनि अंगुर सहयोगी हुन्छ । यो पनि जुन
नेपालमा सबैलाई देखिने यस्ता गम्भीर रोग र सम्पूर्ण हाडजोर्नीको औसधी डल्ले खुर्सानी, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् । पुरा पढि सेयर गरौ !
काठमाडौ : खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं ।त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्ट्रिक तथा अल्सर जस्ता रोगको औषधी समेत हुन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पु¥र्‍याउछ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीका निम्न फाइदाहरु रहेका छन् ।डल्ले खुर्सानीको नियमित खादा मोटोपन घटाउनुका साथै अन्य बिमिन्न रोगको नियन्त्रण यसले गर्छ । हाम्रो शरिरमा चिनिको मात्रा घटाउनुकासाथै यसले हाडजोर्नी लगायतका दुखाइ घटाउछ । अकबरे खुर्सानी स्वादका लागि नभइ स्वाथ्यका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक छ । यो खुर्सानी तपाई हाम्रो घर गाउमा पनि पाइने खुर्सानी हो । खानाको स्वाद बढाउनुका साथै औषधिका रुपमा पनि प्रयोग हुन्छ । यो खुर्सानी खाँदा अरू खुर्सानीको तुलनामा अति नै पिरो र म
काठमाडौ : हामी केराको फल बाहेक यसको बोट, पातको पनि विभिन्ना तरिकाले प्रयोग गर्छौं। गाउँ घरमा केराको पात मेलापातमा खाजा खानको लागि प्लेटको सट्टा प्रयोग गरिन्छ। तर तपाईंलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ कि केराको बोटमा लाग्ने फूल वा बुन्गा जसलाई बनाना हार्ट पनि भनिन्छ, यसको सेवनबाट थुप्रै प्रकारका गम्भीर समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। केराको फूल स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै फाइदाजनक छ र नेपालका केही स्थानहरूमा यसको तरकारी पनि खाइन्छ। जान्नुहोस् के कस्ता फाइदा छ त केराको फूल वा बुन्गाको ! ब्रेस्टमिल्क बढाउँछ यो आयुर्वेदमा पनि उल्लेख छ कि जो महिलाहरुमा स्तन दुधको कमी हुन्छ, उनीहरुले केराको सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ। केरा अथवा केराको फूलको सेवनले महिलाको स्तन दुध बढ्छ। क्यान्सर केराको फूलले क्यान्सर जस्तो ग-म्भीर रोगबाट बच्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। यसमा उच्च मात्रामा एन्टी-अक्सीडेन्ट त
हामीले खाने हरियो साग, तरकारी मध्ये कर्कलोको साग पनि पर्छ । कर्कलोको साग सजिलै भेटेपनि अन्य साग जस्तो लोकप्रिय भने छैन । कर्कलोको सागको बारेमा थाहा नभएको सायदै कोहि होलान् तर पनि कर्कलोको साग भने हामीले आफ्नो नियमित भोजनमा त्यसलाई समावेश गर्दैनौँ । किनभने कर्कलोको साग अन्य सागभन्दा बनाउँदा र खाँदा कोक्याउने हन्छ । कर्कलोको साग हाम्रो स्वा’स्थ्यको लागि अन्य साग वा तरकारी भन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ । कर्कलोको पात खानाले धेरै प्रकारका रो’गबाट हामी बच्न सक्छौँ । कर्कलोको सागमा भिटमिन ए ,बी, र सी, क्याल्शियम, प्रोटीन, पोटाशियम, आइरन, कार्बोहाइड्रेट र ऐन्टी–अक्सिडेन्ट भरपूर मात्रामा पाइन्छ । कर्कलोको पातमा भिटमिन ए आँखाको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले आँखाको रोशनी बढ्छ र मां’सपेशिहरु पनि बलियो हुन्छ । साथै भिटमिन सी ले अनुहारको चाउरीपना कम गर्नमा मद्दत गर्छ । क्या’ल्शियम ह’ड्डिको निर्माण वा बल
महिलाको से’तोपानी बग्ने देखि पुरुषको अण्ड’कोष सुनिने सम्म एउटै घरायसी औषधी जिरा…हेर्नुहोस ।
जीरा हामीले भान्सामा तरकारीमा मसलाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छौ । हामीलाई थाहा छैनकि जीरा कुन कुन रोगको औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर । हामीले यहाँ जीराको औषधीय गुण को विषयमा चर्चा गरेका छौ । शूल उठेमा , धेरै दीसा लागेमाजीराको धूलो, ५० ग्राम, सिदेनूनको धूलो ५० ग्राम र घ्यूमा फुराएको हिङ १० ग्रामको धूलो सबै मिसाएर मनतातो पानीसँग १्१ चम्चा मह अथवा घ्यूमा मिसाएर दिनको ३्४ पटक रोग अनुसार मात्रा मिलाई खाएमा दीसा धेरै लागेको ठीक हुन्छ अजीर्ण खाएको नपच्ने भएमा:छोकडा, मरिच, सिदेनूनको, मुनक्का दाख र जीरा बराबर पिनेर कागति हालेर लेदो अचार बनाउने र सिसीमा राख्ने र बिहानरबेलुका खाना खानु अगाडि १्१ चम्चा चाटेर मात्र खाना खाने गरेमा केही दिनमै अजीर्ण, बान्ता हुने, दीसा लाग्ने जस्ता रोग ठीक हुन्छ र बिस्तारै खाना पनि रुच्दै जान्छ । यो पनि सावधान ! यस्तो अवस्थामा झुक्किएरपनि केरा
स्वस्थ जीवनका लागि हामीले खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । किनकी हरेक रोगको जड खानेकुरासँग जोडिएको हुन्छ । के खाँदा शरीरलाई फाइदा हुन्छ यसबारे सदैब सचेत रहनुपर्छ । अधिकांश मानिसहरुमा खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर स्वास्थ्यमा जोखिम नित्याइरहेका हुन्छन् । त्यसैले खानपानमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । आज हामीले विहान खाली पेटमा भिजाएको चना खानुका फाइदाबारे प्रस्तुत गरेका छौं – १-चनामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइने हुनाले यसको नियमित सेवनले शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ । २-चनामा भरपुर मात्रामा आइरन हुन्छ जसको सेवनले शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढउनमा मद्दत गर्छ र शरीरलाई स्वस्थ र फूर्तिलो बनाउन मद्दत गर्छ । ३- चनालाई तरकारीको रुपमा पनि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । अंकुरित चनामा भिटामिन बी कम्लेक्स हुन्छ जसबाट शरीरलाई उर्जा प्राप्त हुन्छ । ४-चनाको नियमित सेवन गर्नाले शरीरमा पाचन शक्तिलाई